Indlela yokoyisa umfazi onzima Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ungamoyisa njani umfazi onzima. Ukulukula umfazi ayingomsebenzi olula, ngakumbi ukuba akawamkeli. Kukho amaxesha apho, nokuba ungafaka kangakanani na, kodwa uyakwazi ukujongela phantsi yonke imizamo yakho yokumlukuhla.
Ukuba uhlangabezana nemeko efanayo, funda eli nqaku kude kube sekupheleni. Siza kukunika uthotho lwe iingcebiso unako fumana ukuthembela kwabo kwaye ndikuvumele ngena entliziyweni yakho.
Nangona kunjalo, ngaphambi kokungena kumxholo, kuya kufuneka uhlalutye Izizathu zokuba enze izinto zibe nzima kuwe. Ngale ndlela uyokwazi ukuba ingcebiso yethu kufanelekile ukuba uyenze.
1 Ungamoyisa njani umfazi onzima: Kutheni kunzima ukuba umfazi?
2 Ungamoyisa njani umfazi onzima inyathelo ngenyathelo
2.1 1. Nyaniseka
2.2 2. Bonakalisa intlonelo kwimidla yabo
2.3 3. Yiba nguwe
2.4 4. Musa ukuzilahlela
2.5 5. Bonisa umlinganiswa ukuphumelela umfazi onzima.
2.6 6. Khathalela
2.7 7. Yenza isenzo ngokuzolileyo ukuphumelela umfazi onzima
2.8 8. Sukusabela kwingqumbo yabo
2.9 9. Funda ukwazi ixesha lokurhoxa
Ungamoyisa njani umfazi onzima: Kutheni kunzima ukuba umfazi?
Into yokuqala ekufuneka uyihlalutye ngaphambi kokwazi ukuba yintoni enomtsalane kumfazi oyithandayo okanye ukusebenzisa iindlela esizichaza ngezantsi zezi izizathu zokuba kutheni engamkeli.
Zimbini izizathu zokuba kutheni umfazi esenza izinto zibe nzima kuwe:
Uyakuthanda ukudlala nzima kuwe.
Si akanamdla kuwe, ayikukhangeli, ayibuyiseli miyalezo yakho okanye ayibuyiseli iminxeba yakho, mhlawumbi ayive nto kuwe. Kuya kufuneka uhlalutye xa ethetha nawe kuba ufuna wena okanye wenza nje ngembeko. Kule meko sicebisa ukuba sukuqhubeka nokuchitha amandla akhonjengoko ungazukufumana nto kwaye angaziva ekhathazwa.
Kwelinye icala, kukho abantu basetyhini ababonakala ngathi abanamdla kuwe kwaye badlala ngawe ukwazi ukuba unomdla kangakanani kubo. Kule meko, khangela indlela yokufikelela intliziyo yakhe ukuze "uyeke ukulinda" kwaye unokoyisa. Funda ukuze ufunde indlela yokuphumelela umfazi onzima.
Ungamoyisa njani umfazi onzima inyathelo ngenyathelo
Olunye lweempawu eziqhelekileyo phakathi abafazi abanzima, kukuba bafuna ukuzenza engafikelelekiyo. Bangabafazi abafuna Thatha ulawulo yemeko kwaye abaqinisekanga phambi kwalo naliphi na ibinzana lokuncoma okanye elihle. Ukoyisa kufuneka ulandele onke amanyathelo esikubonisa apha ngezantsi.
Ukuba uzimisele ukufumana ukuthembakala kunye nokunconywa ngumfazi ngokubhekisele kubuxoki, ndicinga ukuba awuyi kuphumelela nto. Okuphikisanayo. Ukuba owasetyhini ekunzima ukuwoyisa ukubamba ngokuxoka, ungaqhubeka nokumnikezela ngonaphakade. Ke ngoko, nyaniseka Nokuba kuthetha ukuthetha into angavumelaniyo nayo. Ke njalo uya kuba namathuba amaninzi ukumoyisa kunokuxoka.
2. Bonakalisa intlonelo kwimidla yabo
Sonke siyathanda ukuba njalo iviwe kwaye yahlonitshwa, kwaye akazukuncipha. Beka bucala ubu-narcissism kunye nokuzazisa kwaye elungiselela ukuthanda kwabo kunye nezinto abanomdla kuzo. Amagqabantshintshi ezesondo, iziqhulo ezingcolileyo, okanye "i-macho yase-Iberia" iyabancoma abafazi. Ngokuchasene noko, zama mphathe ngentlonipho novelwano ngokungathi nguwe. Akukho nto ilahlekisayo kunendoda ekulungeleyo ukuvula ingqondo nentliziyo yayo ukuze idibane nomntu ophambi kwayo.
3. Yiba nguwe
Ukoyisa umfazi, elinye lamaqhinga amabi kakhulu anokulandelwa kuku zenze into ongeyiyo. Gcina ukhumbula ukuba olu hlobo lokuziphatha luphela lufunyanwa ngomnye umntu kwaye akukho nto imbi ngaphezu kokufumanisa ukuba uyazenzisa. Into yokuqala yokwenza kukuqonda oko ukhethekile, ukuba unayo into ekungekho mntu wumbi unayo kwaye akukho ndlela ingcono yokoyisa naliphi na ibhinqa kunokuba ukunyaniseka kwisiqu sakho.
4. Musa ukuzilahlela
Kwiimeko ezininzi, a umntu onxungupheleyo uvelisa ukwaliwa okuninzi. Oku kwenzeka ngenxa yokuba ibonakala ivela kude kwaye yenza omnye umntu asondele kwibhendi. Zama ungabonisi onke amakhadi akho ekuqaleni. Zolile kwaye ufumane indlela elungeleleneyo yokusondela kuye.
5. Bonisa umlinganiswa ukuphumelela umfazi onzima.
Ukuba uzimisele ukoyisa umfazi onzima ngokwenza izinto zibe lula kubo, wenza isicwangciso esingalunganga. Ngokucacileyo, kuya kufuneka unikele ingqalelo kuye, umphulaphule kwaye unakekele iimfuno zakhe, kodwa ungabi "yi-pawn" yakhe. Zixakeke yiminqweno yakho kwaye umbonise lonto kukho ubomi obuninzi kunaye. Njengoko ubona, uninzi lweengcebiso zithetha ukuba ungumntu olungeleleneyo kwaye musa ukuwugqithisela ukuze ungabonakali ngathi ukhululekile.
Bonke abantu basetyhini bathanda amadoda enza kakuhle enxibe kakuhle. Ayisiyiyo eyokuya ejimini kwaye ufumane "hunk" ukubonisa ukuba uyazikhathalela, kodwa malunga nokuba mhle kwaye uchubekile. Awudingi ukuya kwimiboniso bhanyabhanya njengekhowudi yokunxiba nokuba, kodwa musa ukunxiba iimpahla zemidlalo nokuba. Fumana isitayile esifanelekileyo kuyo yonke imeko.
7. Yenza isenzo ngokuzolileyo ukuphumelela umfazi onzima
Ukuthengwa Sukuba nexhala, kwaye ukuba uyayenza, zama ukuphumla. Imithambo lolona tshaba lubi kuso nasiphi na isicwangciso sokulukuhla. Ukuba uyakuqaphela oko, unokucinga ukuba ungumntu othobekileyo kwaye uya kumnika amandla ngakumbi, anokumenza phelelwa ngumdla kuwe.
8. Sukusabela kwingqumbo yabo
Xa sizama ukulukuhla umfazi onzima, kufuneka siyikhumbule loo nto Omnye wemidlalo yakhe yokulukuhla uya kuba kukucaphukisa ukubona indlela owenza ngayo. Ngale ndlela uya kubona Usabela njani, ukuba ulahlekelwa luvo okanye umzamo onokwazi ukwenza ukuba uyazi. Ke ngoko, ukuba uzibonakalisa ungakhuselekanga kwaye uthobekile, njengoloyiko noburharha, awuyi kumoyisa. Ukuba ulawula iminqweno yakho kwaye uzolile xa uhlaselwa, ekugqibeleni iya kuba nguye "omvumela ukuba alinde" xa eqonda ukuba awuzukuvuma ukumcaphukisa.
9. Funda ukwazi ixesha lokurhoxa
Njengoko besitshilo ekuqaleni kweli nqaku, kukho amaxesha apho ufuna ukukubeka kuvavanyo kunye nabanye apho angakuthandi khona. Ke ngoko Hlalutya imiqondiso yabo namagama abo ukwazi xa edlala okanye ufuna nje ukuba uhambe. Ngale ndlela uya kwazi xa kufanelekile qhubeka uzama okanye xa unokurhoxa kwaye uyeke ukuchitha ixesha nomntu ongakukhathalelanga.
Ngamafutshane, ukulukuhla i inenekazi elinzima Kuya kufuneka ufunde indlela esebenza ngayo emangalisayo umdlalo wokulukuhla, ngaphandle kokuzilibala ukuba ungubani kwaye, ngaphezulu kwako konke, ngaphandle kokuyeka ukuba nguwe phantsi kwawo nawuphi na umxholo.